घुन्सामा प्रधानमन्त्रीको विकासका कुरा, के–के भने ? (मन्तव्यको पूर्णपाठ) « Naya Page
घुन्सामा प्रधानमन्त्रीको विकासका कुरा, के–के भने ? (मन्तव्यको पूर्णपाठ)
फक्ताङलुङ गाउँपालिका– ६ घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको आज उद्घाटन गर्दै उनले हालसम्म कञ्चनजङ्घामा आउने पर्यटकका लागि लिनुपर्ने विशेष अनुमति प्रावधान खारेज गरिने र तिनका लागि सो क्षेत्र खुला गरिने बताए । घुन्सावासीले राखेका विभिन्न मागलाई सरकारले ध्यान दिने समेत उनको भनाइ थियो ।
सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न पनि उनले सबैमा आग्रह समेत गरे । वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश फैलाएको जनाउँदै उनले यस प्रकारका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
सरकार मुलुकको समृद्धिका लागि चौतर्फीरुपमा लागिपरेको जनाउँदै देशको समृद्धि नचाहने मान्छे विभिन्न तत्व सरकारविरुद्ध लागेको बताए । ‘हामी समृद्धिका लागि अघि बढिरहेका छौँ तर केही पक्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध भ्रम फैलाइरहेका छन्, यो कार्य त्रुटिपूर्ण हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घुन्सामा नव निर्मित स्वास्थ्यचौकी भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, मेरो भ्रमण टोलीमा संलग्न आदरणीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ ज्यू, माननीय मन्त्री ज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु,
खानेपानीको व्यवस्था पनि यहाँ भएको छ । संचार सुविधा आइसकेको छ । अनलाइन क्लास चल्नेसमेत स्थिति भएको छ । टुजी सेवालाई छिट्टै फोरजी सेवामा स्तरोन्नति गरी संचालन गर्ने साथीहरुले भन्नुभएको छ । जेहोस् फोरजी सेवा पनि संचालन हुँदैछ । अब यहाँ मोटरेवल बाटोले जोड्ने कुरा टिपताला पास र उता दक्षिणमा…आउँछ । त्यहाँ जोड्ने कार्य भइरहेको छ ।
चीनतिर पनि बाटो खुलिसकेको छ । यता हाम्रोपट्टि पनि ट्रयाक खोल्न ६ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ, अरु खुलिसकेको छ । यसलाई स्तरोेन्नति गर्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम तीन वर्षभित्रै सकिन्छ । त्यसपछि ब्ल्याकड्रप (कालोपत्रे) गर्ने काम हुन्छ । तीन वर्षभित्र यी सुगम ठाउँहरु हुन्छन् ।
म तपाईंहरुलाई खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । यति दुर्गम ठाउँमा अब यहाँ संचार सेवा आइपुगेको छ । विद्युत सेवा आइसकेको छ । आधारभूत विद्यालय छ । र, यहाँ विरामीहरुले उपचार पाउने स्थिति बनेको छ । स्वाभाविक रुपमा यहाँ प्राथमिक खालकै उपचार सेवा प्राप्त हुने हो ।
किनभने यहाँ सुविधासम्पन्न उपचार हुने त होइन । तर पनि केही नभएको यस ठाउँमा यस स्तरको व्यवस्था गरिएको पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको छ । यहाँ आयोडिनयुक्त नुन नहुँदाखेरी समस्याहरु रहेका छन्, त्यसलाई ध्यानमा राखेर अब आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गर्ने व्यवस्था हुँदैछ । त्यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरुलाई ठीक गर्छ । त्यतापट्टि पनि ध्यान गएको छ ।
भर्खरै मलाई मेरी श्रीमतीले विद्यालयमा छात्रावृत्तिको लागि ५ लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भनेर भनेकी छन् । उत्कृष्ट, गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले त्यसबाट छात्रवृत्ति पाउन सकुन् । यसबाट लगभग त्यसबाट ५ जना बालिका र ५ जना बालक गरी १० जनलाई छात्रावृत्ति दिन सकिन्छ । यो व्यवस्था विद्यालयले मिलाउने काम गरोस् । विद्यालयका पुराना शिक्षकहरु लोकथान प्रसाईं, एलसी गुरुङलाई मैले यहाँ देखिराखेको थिएँ । तपाईंहरु पुराना शिक्षकहरु हुनुहुन्छ ।
यहाँहरुले त्यसको समुचित प्रबन्ध गर्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु । यहाँ हस्पिटल हामीले हे¥यौं, कम्मल रहेनछ । त्यसकारण १० वटा कम्मल उपलब्ध गराउने भनेर मेरी श्रीमतीले भनिदिनू भनेकी छन् । १० वटा ब्लाङकेटहरु यहाँ उपलब्ध गराइनेछ । यी त ससाना कुराहरु भए । व्यक्तिगत रुपमा उनले गर्ने कुराहरु मात्रै भए ।
तर सरकारका तर्फबाट गर्ने कामको हकमा, मुख्य रुपमा यहाँ बाटो र विद्युतको स्तरोन्नति गर्ने माग साथीहरुले यहाँ ज्ञापनपत्रमा राख्नुभएको छ र नियन्त्रित क्षेत्र हटाउनु पर्ने कुराहरु राख्नुभएको छ । र, यसले पर्यटनका लागि सजिलो बनाउने छ । रेष्टिक्टेड एरिया भनेर मान्छेहरु आवतजावत गर्न नदिने खालको स्थिति जुन छ, यसलाई हटाएर यस क्षेत्रलाई एउटा पर्यटकीय आकर्षणको विशेष क्षेत्र बनाउनु परेको छ ।
जब यो बेसक्याम जाने बाटोका रुपमा छ भने यसलाई पर्यटकीय गतिविधि निर्वाध रुपमा गर्न नदिनु पर्ने वा रेष्टिक्टेड एरिया बनाउनुपर्ने त्यस्तो धेरै आवश्यकता छजस्तो लाग्दैन । यस सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले प्रस्ताव बनाएर अगाडि बढाउनु हुनेछ र मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेर यहाँको आवागमन सहज बनाउने, यहाँ हेलिकोप्टर आदि आउने कुरालाई पनि सहज बनाउने र पर्यटकहरु आउने कुरालाई पनि सहज बनाउने काम गरिने छ । ती कामहरु हामी छिट्टै गर्छौं । अहिलेको समयमा धेरै कुराहरुलाई रेष्टिक्टेड गरिरहनुपर्ने वा नियन्त्रित गरिराख्नुपर्ने जरुरी छैन ।
पहिले हामीसँग विओपी थिएनन्, पहिले हामीसँग सुरक्षा निकायहरुको उपस्थिति थिएन । त्यस्तो बेलामा रेष्टिक्टेड गरिएको थियो होला । तर, अहिले जब हामीसँग सुरक्षा निकायहरु छ, विओपीहरु छन्, अरु सुरक्षा निकायहरु छन् भने अत्यावश्यक सुरक्षा र निगरानी हुन्छ, बोर्डर निगरानी हुन्छ र आवागमनको निगरानी पनि हुन्छ । को पस्छ, कस्तो खालको मान्छे प्रवेश गर्छ, को घुम्न आएको छ ? र, त्यसको जानकारी पनि हुन्छ । त्यसकारण अहिले रेष्टिक्टेड एरिया बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता खासै पर्दैन ।
यहाँ साथीहरुले राख्नुभएका मागहरुको सन्दर्भमा तिपताला नाका खोल्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन भन्नुभएको छ । यो कुरा मैले अघि नै भनेँ, यसमा हामीले ध्यान दिने नै छौं । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलाई कालोपत्रेमा परिणत गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । त्यो पनि प्रक्रियामै छ । त्यो हुने नै छ ।
गाउँपालिकामा रहेका एनटिसी टुजी टावरलाई फोरजीमा परिणत गरिदिन भन्नु भएको छ, त्यस सम्बन्धमा पनि काम अगाडि बढिराखेको छ । कञ्चनजंगा बेसक्याम्पको दक्षिणी र उत्तरी मोहडाका क्षेत्रहरुमा अवस्थित पर्यटन पदमार्गमा स्तरोन्नति गरिदिन भन्नुभएको छ । यसलाई पनि ध्यान दिइनेछ । यस पर्यटन पदमार्गलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? पहिले मोटरेवल बाटो आयो भने यसको स्तरोन्नति गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यसकारण मोटरेवल बाटो ल्याउने कुरामा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।
त्यसले सबै कुरालाई सजिलो बनाउँदै जानेछ । साथीहरुले अर्को माग गर्नुभएको छ, यो स्पेसल परमिटको अनिवार्यताचाहिँ खारेज गर्नुपर्‍यो । यस सम्बन्धमा पनि मैले भनिसकें, अबको समयमा यस खालको व्यवस्था धेरै आवश्यक पर्दैन । र, यसलाई खारेज गर्न सकिन्छ । यो उहिलेको जमानाको कुरा हो । अहिले यस्तो अवस्था आवश्यक छैन ।
लघु जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बृद्धि गरेर खम्बाचेन, ग्याब्ला र अम्जिलासाजस्ता गाउँहरुमा पनि विस्तार गरिदिन भन्नुभएको छ । यो एकदम स्वभाविक र आवश्यक कुरा हो । यसमा हाम्रो ध्यान जानेछ । तपाईंहरुले लेखेर दिनुभएका यी मागहरु लगेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुबाट फरवार्ड गर्ने र के गर्न सकिन्छ ? यो काम हामीले गर्नेछौं ।
हामी यस घुन्सा गाउँलाई पर्वतीय क्षेत्रको एउटा नमूना गाउँका रुपमा पर्यटकीय, पर्वतीय नमूना गाउँका रुपमा विस्तार गर्ने छौं । प्रदेश सरकारले यस बारेमा घोषणा गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीजीले मलाई अघि भन्नुभएको र अस्ति नै याङजुङले पनि भनिसक्नु भएको थियो । यस गाउँलाई एउटा नमूना गाउँका रुपमा विकास गर्ने काम अघि बढसिकेको छ ।
नमूना गाउँका रुपमा विकास गर्न केके पूर्वाधारहरु चाहिन्छन् अथवा केके आवश्यक कामहरु गर्नुपर्छ, ती कुराहरु हामीले गर्नेछौं । यो नमुना गाउँ हुनको लागि अब यस गाउँमा पढ्न नपाएको कोही बालबालिका, पढ्न नपाएर कोेही निरक्षर भएको वा स्कुल जान नपाएर निरक्षर रहेको वा स्कुल जान नपाएर र पढ्न नपाइरहेको स्थितिमा कोही हुनुहुँदैन । कसैले सामान्य, प्रारम्भिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार नपाउने खालको स्थिति हुनु हुँदैन वा मैले अघि नै भनेँ, आधारभूत सेवाहरु पुगेको हुनुपर्दछ ।
म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी उत्साहका साथ देश विकासको काममा लागौं । यहाँ राजनीतिक पार्टीहरुमा रुचि राख्ने र क्रियाशील साथीहरु पनि हुनुहुन्छ होला । अहिले सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र अनेक प्रकारका, कहिले पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध, कहिले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, कहिले लिखित, र कहिले छापेर त्यस्ता सामग्री वितरण गरिएका ।
सरकार ढलिहाल्छ जस्ता कुराहरु तपाईंहरुले सुन्नु भएको हुनसक्छ । केही केही मान्छेहरु, केही काम नपाएका मान्छेहरु, देशमा अस्थिरता चाहने मान्छेहरु, देशलाई स्थिरतामा जान नदिन खोज्ने मान्छेहरु र देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका मान्छेहरुले यसो गरिरहेका छन् । हामीले देशको भूभाग समेटेर नक्सा छापेका छौं । सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित हाम्रो छुटेको जमिन हामीले नक्सामा सामेल गरेका छौं । संविधान संशोधन गरेर हाम्रो निशान छापमा राखेका छौं ।
अहिले केही मान्छेहरुलाई त्यो जमिन फिर्ता आउला कि भन्ने डर छ । अहिलेको यो हल्लाखल्ला अरु केही होइन । यो सरकार रह्यो भने त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछ । त्यो जमिन भरसक फिर्ता आउन नपाओस्, आउन पायो भने अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन्छ भन्ने पिर केहीलाई परेको छ, त्यस्तो चिन्ता केहीलाई छ । आफ्नो उचाइ घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता त्यस्ता केहीलाई छ ।
त्यस्ता मान्छेहरुले नै अनेक प्रकारका दुष्प्रचार गरेर सरकारले केही काम गरेन भन्दै हल्ला चलाउने, केही पनि भएन भन्ने हल्ला चलाउने र सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाउने र जनताको मनमा देशमै चिन्ता छाउने खालको वातावरण बनाउने काम गरिरहेका छन् । तिनले सुनियोजित रुपमा त्यस प्रकारका कामहरु गरिराखेका छन् । तर, म तपाईंहरुलाई ढुक्क रहनुहोस् भन्न चाहन्छु ।
मैले चीनतिरबाट पनि नाकाहरु–बाटाहरु खोल्ने नीति लिएँ र पहिलोपल्ट सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीले चीनसँग यातायात र पारवहन सम्झौता गर्‍यौं, पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसो गर्‍यौं । नाकाबन्दीविरुद्ध हामी लडेर सामना गर्‍यौं, नाकाबन्दी हामीले खोलायौं ।
मलाई काठमाडौं मात्रै बसेँ पनि पुग्थ्यो, यहाँ नआएपनि पुग्थ्यो । अस्ति भर्खर म किमाथाङ्का गएँ । बाटो कस्तो बन्दैछ, कसरी बन्दैछ, के हुँदैँछ ? चीनसँगको त्यो हाम्रो यस्तो अर्को नाका हो, जो धेरै उचाइमा जानुपर्दैन र थोरै उचाइमा सधै चल्नसक्छ । यस्तै २३–२४ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । त्यति कम उचाइको सधैँ चल्ने बाटो किमाथाङ्का करिडर अरुण नदीको किनारैकिनार बनिरहेको छ । हामी तमोर नदीको किनारैकिनार अर्को बाटो पनि खोल्दै छौं । पश्चिमतिरबाट पनि थुप्रै नाकाहरु खोल्दै छौं । त्यसकारण उत्तरी भेगका गाउँहरु पनि अब दुर्गम होइनन् ।
चीनदेखि दक्षिणसम्म यी सबै बाटोले जोडिन्छन् र हामी केही वर्षभित्र यी बाटोहरुलाई पक्की बाटोका रुपमा विकास गछौं । यसरी अब देश विकासको बाटोमा अघि बढेको छ । तपाईंहरुले बुनेका गलैँचाहरु अब मान्छेले बोकेर होइन, गाडीले बोकेर बजारसम्म पुर्‍याउनेछ । केही समय मात्रै हामीले यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । यसरी कामहरु हुँदै गरेको, निर्माण कार्य हुँदै गरेको, बाटाका ट्रयाकहरु खोल्दै गरेको तपाईँ देख्नुभएको छ । बाटोको स्तरोन्नति गरेको पनि तपाईंहरुले देख्नुभएको छ । मैले धेरै भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन । तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्, देश अगाडि बढ्छ ।
मैले सरकारलाई गलत बाटोमा जान दिन्न । देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, स्थायित्व र स्थिरताको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा नै यस देशलाई अगाडि बढाउने काम हुन्छ । त्यसहिसाबले कसरी बढाउनु पर्छ ? त्यसमा नै सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ । म दत्तचित्त भएर लागेको छु । हामी विभिन्न ठाउँमा गएर, विभिन्न ठाउँका अवस्थाहरु कस्ता छन्, त्यहाँको विकास कसरी गर्नुपर्छ भनेर हेरिरहेका छौं । म तपाईंहरुलाई ढुक्क भएर विकास निर्माणको काम र उन्नति प्रगतिको काममा अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु ।
म हाम्रा युवाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरुले सही बाटो लिनुपर्दछ । विकासको बाटो लिनुपर्दछ । आ–आफ्नो ठाउँको विकास कसरी गर्ने ? कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ ? एउटा नमूना त हाम्रो याङजुङ शेर्पा नै हुनुहुन्छ, जसले यस दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर यस ठाउँको विकासको लागि फाउन्डेसन निर्माण गरेर विभिन्न ढंगले काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ ।
मलाई आज अलिक माइत आएजस्तोजस्तो पनि लागिरहेको छ । कोेसेली दिएर पठाउन खोजेकोजस्तो देख्छु । तर यो फेरिफेरि आइरहोस् भनेर हो कि के हो ? हामीहरुलाई यस्ता कोसेलीहरु धेरै नदिए राम्रो हुन्थ्यो, धेरै कोसेली नदिए नै राम्रो हुन्थ्यो, उता बस्न मन नलागेर फेरिफेरि आइरहुँजस्तो लागिरह्यो भने….! त्यसैले कोसेलीहरु अलि धेरै नदिए हुन्थ्यो । खैर, म सबै साथीहरुलाई धेरैधेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु । तपाईंहरुकोे ल्होसारजस्ता चाडहरुको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।
सबै स्वस्थ रहनुहोस्, उन्नति र प्रगति गर्नुहोेस् । हाम्रा बालबालिकाहरुको पढाइ राम्रो होस् । गुरुबा, गुरुआमाहरुले राम्रो पढाउनुहोस् । राम्रो पढाउन ध्यान दिनुहोला । र, बालबालिका, साना नानीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मेहनतसाथ पढेर देशका लागि भविष्यमा केही गर्नुपर्छ । यस्तै दुर्गम ठाउँमा जन्मिएका मान्छेहरु सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेका हुन्छन्, सङ्घर्ष र कठिनाइ बुझेका हुन्छन् र उनीहरुले देश विकास गर्ने कुरामा झन् ठूलो र झन् धेरै योगदान गर्न सक्छन् ।
कठिनाइको सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् । तपाईंहरु सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बढ्ने अठोट गर्नुहोस् । अगाडि बढ्न र देश विकास गर्न सम्भव छ । दुर्गमलाई सुगम बनाउन सकिन्छ । दुर्गमको बेग्लै महत्व हुन्छ । सहज बनाएर यसको महत्व यति नजिक हिमाल देखिन्छ, सजिलै यति नजिकैबाट हेर्न सकिन्छ । यो असाधारण सुन्दर कुरा हो । यसलाई हामी आवागमन गर्न सहज बनायौं भने यो पर्यटनको लागि बहुतै राम्रो ठाउँ हुन्छ । यसनिम्ति तपाईंहरुका माग मैले हेरेको छु ।
म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । दिन छोटा छन् । तपाईंहरुले डकुमेन्ट्री बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ, डकुमेन्ट्री राम्रो बनोस् । त्यसले घुन्सालाई चिनाओस् । घुन्सालाई नेपालभरि र विश्वभरी नै प्रचार गरोस् । हामीहरु यहाँको भ्रमणमा आयौं, घुन्साले प्रचार त पायो नै । अब नेपालभरिका जनताले घुन्साको बारेमा थाहा पाउँछन्, धेरै राम्ररी थाहा पाउँछन् । टेलिभिजनहरुले प्रशारण गर्छन्, यूटुुबले प्रशारण गर्छन्, अरुले पनि प्रसारण गर्छ ।
तपाईंहरुको यो सुन्दर मनोरम ठाउँ र यसको प्रचार सबैले गर्छन् । हो, यो ठाउँ अलिकति दुर्गम ठाउँ हो । यो ठाउँमा आउँदा विकासप्रेमी योजनविद् डा.हर्क गुरुङजी र नेपालको विकासमा साह्रै रुचि राख्ने फिनल्याण्डका त्यसबेलाका कार्यवाहक राजदूत मुत्सुनेनलगायतका साथीहरुको यहाँ भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमेको थियो । त्यो अत्यन्तै दुःखको कुरा थियो । यो अलिक जोखिमपूर्ण भूगोल छ ।
भरसक राम्रो मौसम भएको बेला मात्रै आउने र यहाँ आउन हेलिकोप्टरबाट उड्ने गर्नुपर्छ । नत्रभने यो बाटो बनेपछि हेलिकोप्टरबाट धेरै आइरहनुपर्दैन । मान्छेहरु बाटोबाटै आउनजान सक्छन् र दुर्घटना पनि कम हुने स्थिति बन्छ । मौसमको खराबी कारणले दुर्घटना कम हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यस घडीमा खासमा आज घुन्सा आएको बेलामा म डा. हर्क गुरुङ, तत्कालीन बन राज्यमन्त्री गोपाल राई र फिनल्याण्डका हाम्रा मित्र मुत्सुनेन समेतका सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँहरुप्रति श्रद्धासुमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छु । यस ठाउँको विकासलाई ध्यानमा राखेर नै उहाँहरु यहाँसम्म आउनु भएको थियो । अब मैले धेरै समय नलिऔं, हामीलाई छिटो फर्किनुपर्ने छ । त्यसकारण म फेरि सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु । सबैलाई धेरैधेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु ।